Aleo malina marina mafy… | NewsMada
Aleo malina marina mafy…
Mbola ao anatin’ny ady tanteraka izao. Tsy mbola resy tosika ny valanaretina Covid-19. Vao mainka aza mihanaka sy manjaka izany. Ao anatin’ny vanim-potoan’ny ririnina izao: mahazo vahana ny tsimokaretina Coronavirus, haingam-pitombo, matanjaka…
Amin’izay hery sy fitomboan’ny tsimokaretina izay, mety hitombo isa hatrany ny olona mitondra ny tsimokaretina ho an’ny faritra Analamanga. Tombanana any amin’ny faran’ny volana aogositra vao hihena izany, raha ny fandinihan’ireo manampahaizana.
Ho resy amin’izay faran’ny aogositra izay izao fihanaky ny valanaretina Codiv-19 izao? Tsy mitsaha-mitombo, ohatra, ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina; eny, na misy hatrany koa aza ny marary sitrana. Miankina amin’ny atao ihany io.
Tsy misy fandresena tongatonga ho azy amin’izao fa miankina amin’ny ataon’ny tsirairay miaraka no ahombiazana. Izay ny ahazoana antoka handresena ny fahavalo iombonana, tsy hita maso, tsy mifidy olona na toerana. Koa mila malina tanteraka ny tena.
Faritra isaina amin’ny rantsan-tanana sisa tsy isian’ny tsimokaretina amin’izao eto Madagasikara. Ankoatra ny olom-pirenena tsotra, maro ny sokajin’olona efa tratrany aretina: depiote, loholona, mpitsabo, minisitra teo aloha, mpitondra fivavahana…
Tsy vitan’izay, mahabe resaka eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izao ny fanambaran’ny manampahaizana mpikaroka hoe: mifindra amin’ny alalan’ny rivotra ny tsimokaretina Coronavirus. Mila ampanarahina izany ny paikady iatrehana ny loza.
Na ahoana na ahoana, mila malina hatrany ny tena: ampitomboana sy amafisina hatrany ny fitandremana. Tsy inona fa fanajana sy fampiharana amin’ny antsipiriany sy manontolo ireo fepetra isakanana sy iadiana amin’ny fahavalo. Izay ihany no handresena.
Ny mahery tsy maody, tsy ela velona; eny, na eo aza ny fanefitra sy ny fanafana. Takina ao anatin’izay fahamalinana izay ny fifampitokisana, ny firaisankina, ny fifampitsinjovana, ny faharetana… Izay efa natao sy vita izay aza, niaretana sy naharetana?